Dalalka Islaamka iyo gobollada Soomaaliya oo maanta laga soomay | Sagal Radio Services
Dalalka Islaamka iyo gobollada Soomaaliya oo maanta laga soomay
Inta badan dalalka Muslimiinta oo ku dhawaaqay kowda bisha barakeysan ee Ramadan.
Dalalka Muslimiinta ee Caalamka ayaa maanta maalinta koowaad ee bisha Ramadaan laga sooman yahay, kadib markii horay loo iclaamiyay in bisha Shacbaan ay ku dhamaatay sodon, isla markaana Ramadaanka uu ku asteysan yahay maalinta Arbacada ee maanta ee taariikhda milaadiga tahay 10-July.
Boqortooyada Sacuudiga Carabiga ayaa horay u sheegay in Bisha Ramadaan ay kow tahay maanta oo arbaco ah, iyadoo dalalka Muslimiinta ay ku waafaqeen, waxayna taas meesha ka saartay is khilaafkii maalmaha Soonka iyo Ciida.
Inta badan Gobolada Soomaaliya ayaa si aan khilaaf ku jirin iyana maanta looga sooman yahay, waxaana deegaanada ay maamulaan Xarakada Shabaab laga iclaamiyay habeen hore in maalinta Soon ay tahay Arbacada, iyadoo dadweynaha ay durba isu diyaariyeen.
Qeybaha ay dowladda ka taliso ayaa iyana si isku mid looga soomay, markii dadka ay inta badan isku waafaqeen bilashada bisha Ramadaan, maadaama Shacbaan ay ku dhamaatay sodon, waxaana maalmihii u dambeeyay diyaar garow ka socday suuqyada waa weyn.
Gobolka Galgaduud oo inta badan aanu ku waafiqi jirin maalmaha hore ee Soonka ayaa qeyb ka ahaa khilaafka, iyadoo maanta si guud ah looga sooman yahay, markii ay iclaamiyeen Culumaa'udiinka Ahlusuna in bisha shacbaan ku dhamaatay Sodon.
Laakiin waxaa la soo sheegayaa in Gobolka Mudug, gaar ahaan qeybaha ay ka kooban tahay Galkacyo ee Koofur iyo Waqooyi aan maanta laga sooneyn, iyadoo maamulada labada dhinac aanay ka hadlin bisha barakeysan ee Ramadaan.
Deegaanada Puntland ayaa iyana si guud looga soomay, iyadoo dadka mar hore isku sii diyaariyeen, waxaana wadaadada ay dadka kala hadleen idaacadaha, iyagoo ku baaqayay in dadka ay soomaan maanta oo arbaco ah.
Sidoo kale deegaanada Somaliland ayaa iyana si guud ah looga soomay, waxaana wadaadada ay iyana dadka kala hadleen idaacadaha, kuwaasoo dadweynaha ugu baaqayeen in bisha Ramadaan dhalatay, dadkana ay soomaan.
Si kastaba ha ahaatee bisha Ramadaan ayaa Sanadkii hore iyo sanadkan ay tahay mid kala duwan, iyadoo sanadkii hore uu ku soo aaday, xilli dalku ka jiray olole doorasho iyo loolan siyaasadeed, xilligaasoo ay ku ekeyd dowladdii KMG aheyd.
Tags Bisha Ramadan